IMBONGI ESENCANE EBIYINTANDOKAZI EMCIMBINI WOKUGCOTSHWA KUKAMENGAMELI | Scrolla Izindaba
IMBONGI ESENCANE EBIYINTANDOKAZI EMCIMBINI WOKUGCOTSHWA KUKAMENGAMELI
UAmanda Gorman, oneminyaka engama-22 kuphela ubudala, uyimbongi encane kunabo bonke abasho izinkondlo emcimbini wokugcotshwa kamengameli.
Kulabo ebebezonandisa obekubandakanya uLady Gaga noJennifer Lopez, yile mbongi esencane eyebe lo mbukiso ngesikhathi kufungiswa uJoe Biden.
UGorman ujoyine iqembu elihlonishwayo lezimbongi, okubandakanya izingcweti zemibhalo uMaya Angelou noRobert Frost, ngemuva kokufunda esiteji phambili kwezethameli zomhlaba eziyizigidigidi.
Ukufunda kwakhe i- “The Hill We Climb” kuveze izikhathi zokuqala zikaBiden njengomengameli wama-46 waseMelika.
Bekuyinkondlo yemizuzu emihlanu ebiza “ubumbano nokuhlangana” ngesikhathi senhlekelele eyayingakaze ibonwe eMelika.
Uvule imisho ethile mayelana nokukhuliswa kwakhe, echaza imvelaphi yakhe “njengentombazane emnyama, ezalwa yizigqila futhi eyakhuliswa ngumama yedwa,” ebiphupha ngokuba ngumengameli ngelinye ilanga, “kodwa namhlanje uzithola efunda inkondlo efundela uMengameli.”
Uqhubeke nokukhuluma ngokuhlaselwa kwe-Capitol ngenyanga edlule – yona kanye le ndawo akhuluma kuyo.
“Sibonile umbutho ozocekela phansi isizwe sakithi kunokwabela ngaso, futhi ucekela phansi izwe lethu okuyinto ebambezela intando yeningi,” kusho uAmanda.
“Futhi lo mzamo ucishe waphumelela. Kodwa yize intando yeningi ingabambezeleka ngezikhathi ezithile, ngeke yehlulwe unomphela.”
Ngaphandle kokulahla udlame uTrump abelukhiphe emasontweni akhe okugcina esezikhundleni, uAmanda noBiden abalibalanga igama lakhe.
Esikhundleni salokho, wethule inkondlo yakhe ngomusa, obekungekho lula kule mbongi esencane, eyayinenkinga yokukhuluma isencane.
Izolo bekuwusuku oluqhakaze kakhulu emlandweni womsebenzini kaGorman, ozokhipha izinkondlo zakhe zokuqala, ezibizwa nangokuthi “The Hill We Climb”, ngoMandulo.